जुत्तामा हेपिएको विराटनगरबासी – Janacharcha.com
०३ माघ २०७८, सोमबार
» सम्पादकीय अंक: 1937
जुत्तामा हेपिएको विराटनगरबासी
काठमाडौंमा नबिकेको जुत्ता लगाउनु पर्ने के विराटनगरवासीको हैसियत हाे ?
Janacharcha.com आइतबार, पौष ०६, २०७६ मा प्रकाशित
विराटनगर, पुष ०६
हामीले पुष ५ गते “काठमाडौंमा उब्रीएको जुत्ता विराटनगरमा सल्टाइदै” शिर्षकमा समाचार प्रकाशित गर्यौं । त्यो समाचार हामीले आफ्नै अनलाईनको आधिकारीक फेसबुक पेज र अन्य केहि विराटनगरका सार्वजनिक पेजहरुमा पोष्ट समेत गर्यौ । जसमा अधिकासं पाठकहरुले समर्थन जनाउदै प्रतिक्रिया समेत जनाए । सतप्रतिशत पाठकहरुले विराटनगरमा जुत्ता मेलाको नाममा ठगीधन्धा चलिरहेको समर्थन जनाउदै आफुहरु पनि ठगीमा परेको केहि पाठकहरुले कमेन्ट समेत गरे ।
विषेशगरी जुत्ताहरु गुणस्थरीय नभएको, डिफेक्ट जुत्ताहरु खुलेआम बिक्रिवितरण भईरहेको र काठमाडौंको छनौट माल विराटनगरमा बचेर विराटनगरवासीको अपमान गरेको विराटनगरवासीले खुलेआमा गुनासो व्यक्त गरे ।
विराटनगरवासीले यसरी खुलेआम ठगीधन्धा भईरहेको र आफुलाई होच्याउन खोजेको गुनासो गरेतापनि राज्यको नियमक निकायहरु भने यस विषयमा मौन छन् । प्रदेश सरकारको उद्योगमन्त्री जगदिश कुशियत र महानगरपालिकाको मेयर भिम पराजुलीको उपस्थितिमा उद्घाटन भएको उक्त जुत्ता मेलाको विरुद्ध सरकार पनि केहि बोल्न सकिरहेको छैन् । उद्घाटनको समयमै मन्त्री र मेयर ज्युले स्वदेशी उत्पादन यस्तो उस्तो भन्दै फुलबुट्टा जडित दिएको भाषणका कारणले पनि होला अहिले उनीहरुलाई आफ्नो भाषणविरुद्ध गई अनुगमन र निरिक्षण गर्न असहज भईरहेको छ । वहाँहरुले भुल्नु भएजस्तो वहाँ जनप्रतिनिधि हो र जनप्रतिनिधि व्यापारी भन्दा जनता प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ ।
विराटनगरवासी जागरुक हुनु पर्छ
जुत्ता मेलाको नाममा ठगीधन्धा भईरहेको विराटनगरवासीले महशुस गरिसकेका छन् । उनीहरुले ठगीधन्धाको समाचारमा जनाएको समर्थनले पनि मेला प्रति जनतानै असुन्तुष्ट रहेको प्रतिविम्वित गर्दछ । तर खुलरुपमा कोही बोल्न सेकेका छैनन् ।
हाम्रो जस्ता सक्षरता कम भएको देशमा जनताको आवजले खासै महत्व पाउने गरेको छैन् । जनताको विरोध त “काग कराउदै जान्छ, पिना सुक्दै जान्छ” भने जस्तो हुन्छ । तर स्वतन्त्रताको उच्च मुलुयाकंन हुने देशमा भने जनताको असुन्तुष्टि रहदा रहदै व्यापारीले त परै जाओस् सरकारले पनि कुनै कदम चाल्न सक्दैन । हाम्रो विड्बना यही हो, भन्नालाई स्वतन्त्र देश, लोकतान्त्रिक देश तर वास्तावीकतामा दलाल, पुजीपती र भष्ट्रले चालाएको हाम्रो देश हो । जहाँ व्यापारीले जति ठगी गरेतापनि राज्यले कुनै एक्सन लिन सक्दैन् ।
हाम्रो ध्यय यति हो, सरकार निश्क्रिया रहेका बेला जनतानै जाकरुक बन्नु पर्छ । ठगी भयो भन्दै चुप लागेर बस्यो भने, व्यापारीको मनोबल अझै उच्च हुनजान्छ । तसर्थ जनताले पनि सरकालाई झकझाउन जरुरी छ । यस्तो किन भईरहेको छ ? वास्तवीक कुरा के हो ? भन्दै जनताले पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रश्न गर्नुपर्छ । र खुलेआम ठगीधन्धा चलाउनेलाई समाजिक बहिस्कार गरी समाजमा नङ्याउन सक्नु पर्छ । हाम्राे हैसियत, काठमाडौंमा छाटिएर आएको जुत्ता लगाउने होइन् भन्न सक्नुपर्छ ।